SANNAD GUURADDII 61aad EE HALGANKIIXISBIGII S.Y.L
HALHEYSKII XISBIGA : QABIIL QARAN MA NOQDO
W.Q Dr. Abdulkadir Ali Bolay
Marka hore waxaan hambalyo iyo boogaadin ba u dirayaa dhamaan ummadda soomaaliyeed meel kast oo ay joogaan, maanta oo ah sannad guuradii 61aad ee guushii uu soo hooyey xisbigii S.Y. L, waxaan ilaahay ugu baryeenaa inuu naxriistiisa ku maneysto inta mootan ee naftoodda u soo huray xornimadda aanu maanta haysano , inta nool na waxaanu Eebbe ugu rajayneynaa in ay ku noolaadaan bash bash iyo barwaaqo, shacabka soomaaliyeed na dhibaatadda ku habsatay inuu ilaahay ka qaado .
Haddii aan dib u milicsaddo oo si kooban u xuso xisbigii SYL waxaa dhidibadda loo dhigay 15.05.1943kii oo ay ku kulmeen dhallin yaro ka kooban 13 , kuwaasoo ahaa dhallinyaraddii fahmay dhibaatooyinka iyo hagar daamadda gumeysiga uu leeyahay shacabka soomaaliyeed, iyaga oo aad u diidan siyaasadda gumeysgia oo ahayd qaybi oo xukun, dhallinyaraddaasi waxay si weyn xil isaga saareen sidii shacabka soomaaliyeed xornimo taam ah loo gaarsiin lahaa .
Ururkaasi wuxuu ku tallaabsaday guulo la taaban karo , isla markii ba wuxuu dastuurkiisa ku soo bandhigay ama ku xusay dhibaatadda qabyaaladda ay u leedahay horumarka iyo midnimadda shacabka soomaaliyeed .
Ururka SYL durbaddii ba wuxuu bilaabay inuu olole naxriis la'aan ku qaado qabyaaladda iyo kuwa qabiilka adeegsanaayo , taasoo si weyn uu ugu guuleystay in qabyaaladda uu ka hor tago oo si tartiib tartiib ah u dagaalamo .
Haddii aan xuso waxaa door weyn ka qaatay la dagaalankaasi , dhallinyaraddii horseedka ka ahaa xisbiga oo ay ka mid ahaayeen :-
1. Adan Carte
2. Adan Gurey
3. Warsame Jooglaqe
4. Osman Galay
5. Maxamed Gaagaale
6. Cabdikariim Beerweyne
7. Warsame Joqof
8. Abuu Raas
Iyo kuwa kale oo aan xasuusanin oo door weyn ka qaatay la dagaalanka qabyaaladda , kuwaasoo fahmay in qabiilku caqabad uu ku yahay halganka ummadda soomaaliyeed .
Waxayna guul la taaban karo ay ka gaareen in ay soo af jaraan colaaddii dhex taalay walaalaha soomaaliyeed .
Munaasabaddii sannad guuraddii 5aad ee aasaaskii ururka SYL , waxaa ka soo qayb galay wafuudii kormeerka ku kala soo bixiyey goboladdii 5ta soomaaliyeed, ujeeddada ugu weyn kormeerkaasi wuxuu ahaa in la helo soomaali weyn, lana wacyi geliyo dadweynaha soomaaliyeed sidii loo helo midnimo soomaaliyeed oo loo tuso wafuuddii ka imaaneysi United Nations.
Haddii aan tusaale ahaan u soo qaato kormeerkaasi waxa hogaaminaayey :-
1. Mudane Maxamed Ahmed Ottavio
2. Mudane Axmed Allore
3. Mudane Ladane
Iyo mudanayaal kale oo aan xusus ku soo koobi karin balse , taariikhda ummaadda soomaaliyeed xusi doonto , Waxaa kale oo xusid muddan in aan halkaani ka xuso dhallinyaraddii ka tirsaneyd Somali Signal Squadro oo door weyn ka qaatay in ay kormeerayaasha ku guuleystaan kormeerkoodda maxaa yeelay meel alla meeshii ay cagata dhigaanba waxaa taar ka hormari jiray dhallinyaradaasi Somali Signal Squardro, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen :-
1. Cabdiraxmaan Alfaas
2. Cabdirisaaq Xaaji Xuseen
3. Cabdi Adan
4. Cali Xirsi Jano gale
Waxaa kaloo xusid muddan dhallinyaraddii ku kala baahsaneyd goboladdaasi, si ay u barayrujiyaan dadweynaha ku nool gobaladaasi isla markasina ay ku wacyi geliyaan waddaniyadda iyo midnimadda shacabka soomaaliyeed, dhallinyaradaasoo gacan weyn ka geystay inuu najaxo kormeerka wafuudda SYL ay ku maraayeen 5ta soomaaliyeed waxaa ka mid ahaayeen :-
1. Maxamed Raaji Maxamed
2. Cali Food
3. Axmed Qamac
4. Xeero Xaaji
5. Ibraahim Baalay
6. Dheere Maxamed Shariif
7. Xasan Colow
8. Cabdulqadir Qararac
9. Adan Tasame
10. Xuseen Ramadaan
Iyo kuwa kale oo aan halkani aan ku soo koobi Karin , guusha ugu weyn uu kormeerkaasi laga gaaray waxay ahayd mideynta ummadda soomaaliyeed ee loo kala qaybiyey 5 qaybood , taasoo lagu qaybsaday shirkii Berlin ee lagu qabtay sanadkii 1884kii.
Waxa ay koormeerayaashii ay caddeeyeen in ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen ay diyaar u yihiin mideynta ummadda soomaaliyeed, isla markaasina waxay xuseen dhibaatooyinka hortaag halganka gobannimo doonka soomaaliyeed ay tahay qabyaaladda oo ku abuurtay mujtamaca soomaaliyeed is naceeb iyo kala qaybsanaan .
Munaasabaadaasi oo lagu xusaayey sanad guuraddii 5aad waxaa heeso wadani ah ka soo jeediyey Abwaankii weynaa Qasim Hilowle (Iskiifo) , heesahaasi oo shacuur wadanimo ku abuurtay dhamaan shacbiga soomaaliyeed oo ka soo qayb galay munaasabaddaasi , heesahaasi waxaa ka mid ahaa :-
· Soomaaliyey qabiil qabiilka daaya , soomaaliyeed qabiil qaran ma dhiso
· Soomaaliyey toosooy toosooy isku tiirsanayey , hadba kii taag daraney taageera weligiina .
· Soaomaaliyey daaya kani waa ugaas , kani waa suldaan , kani waa islaw, kani waa malaaq .. waa inaad ilawdaanee !!!!
Heesahaasi waxay wax weyn ka tareen kordhinta wacyiga shacbiga soomaaliyeed taasoo ay ku beertay wadaniyadda , oo ay shacabka fahmeyn qiimaha ay leedahay waddaniyadda . Markii shacabka soomaaliyeed uu gaaray bisaal una fahamay qiimaha weyn ee ay leedahay waddaniyadda , ka dib ayaa loo tafaxaytay si loo dooni lahaa xornimo iyo madaxbanaani iyo sidii looga hortigi lahaa xeeladdaha uu adeegsado gumeysiga oo ahayd qaybi oo xukun, ujeeddada ka dambeysina ay ahayd in aan la gaarin midnimo soomaaliyeed .
Taasoo guul u ahayd ururka SYL , inuu hor is taago himilooyinkii gumeysiga uu ka lahaa ciidda soomaaliyeed , ururka oo kalsooni ka haystay shacabka soomaaliyeed ayuu guushaasi gaaray , kalsoonidaasi xoog leh ayaa soo dedejisay in la gaaro xornimo iyo madaxbanaani , taasina waxaa lagu gaaray midnimadda shacabka soomaaliyeed .
Runtii qabiilku wuxuu soo maray marxalado kala duwan,taasoo ay sababtay burbur, kala daadsanaan , is aamin daro , dhac iyo in xoog la isku sheegto , intaasoo dhan ayaa qabiil u geystay shacbiga soomaaliyeed .
Arrimahaasi xanuunka badan waxay mar wali ba dhibaato ku ahayd midniamadda iyo horumarka ummadda soomaaliyeed .
Haddaba waxaa loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed inuu hal hays ka dhigato
"Qabiil Qaran ma dhiso"si looga gudbo qabiilka oo loogu gudbo waddaniyadda taasoo lagu gaari karo horumar iyo midnimo isla markaasina lagu soo celin karo qarannimaddii burburtay, calankii , haybaddii , sharaftii iyo magacii ummadda soomaaliyeed oo baaba'ay .
Maxaa yeelay waxa halkaani na dhegay waa qabiil, sidaasi darteed waxaa haboon in shacabka soomaaliyeed uu fahmo dhibaatadda ay leedahay qabyaaladda .